Long ကရထားခရီးတွင်လုပ်ဖို့အမှုအရာ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > Long ကရထားခရီးတွင်လုပ်ဖို့အမှုအရာ
တစ်ဦးက ရထားစီးနင်း ခေတ္တနားဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုတွန်းအားပေး, ပြတင်းပေါက်ကထွက်ကြည့်နဲ့တန်ဖိုးထား ဇိမ်ခံ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ယူပြီး၏. ခရီးသွားလာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းအင်ကိုတက်ယူနိုင်ပါသည်, ရှည်လျားသောမီးရထားခရီးပိတ်ထားခြင်းနှင့် unwind ဖို့အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါသည်. သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ထဲကအများဆုံး Make - ကဒီမှာတိုင်းခရီးသွားအပန်းဖြေခြင်းနှင့်ပျော်စရာစီးနင်းအာမခံချက်မှရှည်လျားသောမီးရထားခရီးအပေါ်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်တန်းအရာဖြစ်ကြ၏.
သင့်ရဲ့နားကြပ်ပေါ်တွင်တင်နှင့်သင့်အကြိုက်ဆုံးသီချင်းနားထောင်နေစဉ်နှေးကွေး. ပုံရှုခင်းကိုခံစားရန်မပိုကောင်းလမ်းရှိပါတယ်. သင်သည်သင်၏အကြိုက်ဆုံးအနုပညာရှင်ကိုနားထောင်အဖြစ်လှပသောရှုခင်းအလုအယက်အတိတ်အပန်းဖြေခြင်းနှင့်စောင့်ကြည့်.
အဘယ်ကြောင့်သင့်ရဲ့ခရီးအပေါ်အသစ်တစ်ခုကျွမ်းကျင်မှုမဖွံ့ဖြိုး? သင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားပွောသောတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှခရီးသွားနေတယ်ဆိုရင်, ရှည်လျားသောမီးရထားခရီးအနည်းငယ်စကားများနှင့်စာပိုဒ်တိုများဖွင့်ကောက်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုကမ်းလှမ်း.
နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်သွားရောက်လည်ပတ်တဲ့အခါမှာဒါဟာမဆိုဘာသာစကား၏အခြေခံကိုသိရန်သည်ကောင်း. ကံကောင်းတာက, ရှိပါတယ် အများအပြား apps များ နှင့် podcasts တွေကိုသင်လူကြိုက်များစပိန်အပါအဝင်ကြောင်းကမ်းလှမ်းမှုသင်တန်းများဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်, ဂျာမန်, အီတလီ, နှင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားများ.
စာဖတ်ခြင်းစိတ်ပြေလျော့သွားဘို့ကြီးသောသည်နှင့်အစဉ်မပြတ်အချိန်လွန်မှသာယာသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. Long ကအလုပ်ချိန်နှင့်အလုပ်ရှုပ်ဘဝတွေကိုစာဖတ်ဘို့လျော့နည်းအချိန်ဆိုလိုနိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးရှည်လျားသောမီးရထားခရီးသင့်ရဲ့စာအုပ်သို့မဟုတ် eBook သို့ခုန်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုကိုယ်စားပြုတယ်. သငျသညျပျင်းရိ feeling နှင့်တစ်စုံတစ်ယောက်သင်တို့အဘို့စာဖတ်ခြင်းလုပ်ချင်နေတယ်ဆိုရင်, အသံ-စာအုပ်တစ်အကြီးအကအခြားရွေးချယ်စရာ.
လက်တော့ပ်နှင့်အတူ, အိုင်ပက်, နှင့်သင့်စွန့်ပစ်ခြင်းမှာစမတ်ဖုန်းများ, ကလွယ်ကူမယ့် onboard ဖျော်ဖြေရေးကိုရှာဖွေ. သင့်ရဲ့အပေါ်ကိုတက်ကိုဖမ်း အကြိုက်ဆုံးရုပ်မြင်သံကြားစီးရီး သို့မဟုတ်သင်စောင့်ကြည့်ဖို့တောင့်ခဲ့ကြပြီရုပ်ရှင်ကြည့်ရှု.
ရရှိနိုင်ပါသို့မဟုတ်မ WIFI လည်းမရှိရှိမရှိ, မဆိုပြသဒေါင်းလုတ်လုပ်သို့မဟုတ်အကောင်းတစ်စိတ်ကူးက ရုပ်ရှင် သင်သည်သင်၏ခရီးစဉ်မတိုင်မီစောင့်ကြည့်ဖို့စီစဉ်. သင့်ရဲ့အများကြီး-ကိုချစ်၏အပေါ်မျက်နှာပြင်ပုံပြင်များပေါ်တက်မီလိုက်နှင့်သင်သိမတိုင်မီ, သင်သည်သင်၏ဦးတည်ရာမှာဖြစ်လိမ့်မယ်.
ဒါဟာတာရှည်မီးရထားခရီးစဉ်အတွင်းပင်ပန်းခြင်းနှင့်နှေးကွေးခံစားရရန်လွယ်ကူသည်. နာရီရထားပေါ်မှာထိုင်ပြီးနောက်, လာသောအခါဖြစ်နိုင်သမျှသင့်ရဲ့ခြေထောက်ဆန့်ရန်အရေးကြီးပါသည်က. အဆိုပါစစ်သုံးအိုးခွက်မှတစ်ဦးကရေတိုလမ်းလျှောက်အချိန်ကိုသုံးစွဲဖို့သင်ကူညီမည်ဖြစ်ပြီးအားသွင်းခံစားရရန်. ရန်ရထားလမ်းလျှောက် စစ်သုံးအိုးခွက်, ယင်းကိုကြည့် ရှုခင်း နှင့်သင့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုအဖျော်ယမကာနှင့်အတူအချို့သောအချိုပွဲပျော်မွေ့
မီးရထားနဲ့ခရီးသွားကြမယ့်နိုင်ပါတယ် လူမှုရေးအတွေ့အကြုံ. လူသစ်တွေ့ဆုံ ရထားပေါ်တွင်၏အခြား Modes သာထက်ပိုမိုလွယ်ကူဖြစ်ပါသည် တင်ဆောင်. လေယာဉ်မတူဘဲ, သင်သည်အခြားခရီးသွားများနှင့်အတူန်းကျင်ရွှေ့နှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လွတ်လပ်မှုကိုရှိ. သငျသညျအခြားလူများနှင့်၎င်းတို့၏ပုံပြင်များထဲကနေဘာတွေသင်ယူနိုင်တယ်ဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဒါဟာဖြစ်ပါသည် – ဘဝအကြောင်းပြောဆို, အလုပ်, နှင့်သင်၏ကွန်ယက်ကိုကြီးထွား. သူတို့ဖတ်နေတဲ့စာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသင့်အနားကလူကိုမေးပါ, သူတို့ကိုမွှေးကြိုင်ပါစေ, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့စကားပြောချင်စိတ်ပဲ ခရီးလမ်းဆုံး သူတို့မှခရီးသွားလာနေ. ဒါဟာသင်စဉ်များပြောဆိုမှုများဖြတ်သန်းနေသည် ရထားဥရောပခရီးသွားလာ ကြောင်းတည်မြဲအမှတ်တရများဖန်တီး.
အဆိုပါရှည်လျားသောမီးရထားခရီးသည်သင်၏ကာလအတွင်းတခါတရံအေးဆေး၏တစ်ခုတည်းသောကာလများမှာ ခရီးစဉ်. ဒါဟာသင်ဆီထည့်ဖို့အတှကျစိတ်ကူးအခွင့်အလမ်းဖြစ်နှင့်သင့်ကိုရှေးခယျြလိုရာခရီးအဘို့အပွငျဆငျနိုငျ. သောက် ရေများများ, အစာအနည်းငယ်စားပါ, ဖြစ်နိုင်လျှင်, အိပ်. သင့်ရဲ့ရှည်လျားမီးရထားခရီးကိုသုံးပြီးအမြော်အမြင်ရှိရှိသင်လန်းဆန်းနှင့်သရုပ်ြပခံစားရရန်ကူညီပေးပါမည် - သင်၏နောက် destination သည်များအတွက်အဆင်သင့်.
သင်သည်တာရှည်မီးရထားခရီးစဉ်အတွင်းဘာလုပ်ရမလဲ? ကျွန်တော်တို့ကိုမှာကျွန်တော်တို့ကို tweeting အားဖြင့်သိပါစေ @SaveATrain! , သင်တို့သည်ငါတို့၏အခြားလူမှုရေးလမ်းကြောင်းများပေါ်တွင်ရှာတှေ့နိုငျ Saveatrain
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fthings-long-train-journeys%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
longtrainjourneys ရထားခရီးသွား ခရီးသွား